China Six akabatana Robhoti Series fekitari uye bhizimisi | Daya
Nhatu akabatana robhoti dzakatevedzana JZJ50A-270, 100A270, 50KG
Nhanhatu akabatana robhoti dzakatevedzana JZJ06A-090 6KG
Nhanhatu akabatana robhoti dzakatevedzana JZJ10A-160 10KG
Nhanhatu akabatana robhoti dzakatevedzana JZJ20A-180 20KG
Pfupiso sumo otomatiki kubata robhoti:
1. Irobhoti yekurodha uye yekuburitsa ine yakakura mutoro renji kubva kumakirogiramu akati wandei kusvika kumazana akati wandei emakirogiramu;
2. Kumhanya kumhanya kunokasira uye kuchinjika;
3.Flexible chiito, inogona kupedzisa yakaoma kubata uye kurodha uye kudzikisa mabasa;
4. Kuvimbika kwakakwirira uye nyore kugadzirisa.
5. Inogona kupedzisa iyo-yechitatu-mativi nzvimbo kufamba kwezvinhu zvinorema sekubata, kutakura, kupidigura, kumisikidza uye zvichingodaro. Inopa chishandiso chakanakira kubata nekubatanidza zvinhu on uye off-line uye kuungana kwezvigadzirwa zvikamu. Iro kurodha uye kuturura robhoti kunogona kudzikisira kusimba kwevashandi uye nekupa zvakachengeteka kubata zvinhu. Panguva imwecheteyo, inogona zvakare kusangana nenzvimbo yakasarudzika, senzvimbo dzine njodzi apo vashandi vewekishopu-proof yemusangano vasingakwanise kupinda, uye inopa mhinduro dzesisitimu.
6. Nezvakasiyana-siyana zvisina kujairika zvigadziriso, iyo robhoti inogona kubata akasiyana maumbirwo eiyo workpiece, uye opareta anogona kusimuka kusimuka ndokumhara mutoro, kufambisa, kutenderera, kusvetukira kumberi nekuumburuka. Uye mutoro unokurumidza uye kunyatsoiswa munzvimbo yakatarwa. Nayo, munhu mumwe anogona nyore kushandisa zvinhu izvo vanhu vashoma chete vanogona kufamba.
Matanhatu akabatana Robhoti Series Technical Parameter
Ndeapi makuru mabhenefiti ekutakura marobhoti?
1.Robotting uye inobata robhoti inotora nzvimbo shoma, inoenderana nekugadzwa kwetambo yekugadzira mumusangano wevatengi, uye inogona kuchengetedza nzvimbo yakakura yekuchengetera. Uye iyo robhoti inogona kunyatso kuiswa munzvimbo yakatetepa.
2. Iyo palletizing uye inotakura robhoti ine yakapusa dhizaini uye mashoma zvikamu. Naizvozvo, zvipenga zvikamu zvine yakaderera kutadza chiyero, kuvimbika kuita, kugadzirisa kuri nyore uye mashoma maspareti zvikamu.
3. Iko kushandiswa kwesimba kwekubata uye kubata robhoti kwakaderera. Pasi pemamiriro ezvinhu akajairika, simba rekurapa uye kuendesa robhoti riri pamusoro pe26KW, nepo simba rekupora robhoti riri re5kW. Kunyanya kudzikisa mashandiro evatengi.
4. Iyo palletizing uye inobata robhoti ine simba rinoshanda. Kana saizi, vhoriyamu, chimiro chechigadzirwa chemutengi uye chimiro uye saizi yema pallet zvachinja, zvakajairika kugadzirwa kwemutengi hakuzokanganiswe neshanduko diki pane yekubata skrini. Iyo yekuvakazve palletizing uye kutakura robhoti inonetsa zvikuru, kunyange haigone kuitika.
5. Zvese zvinodzora zve palletizing uye yekubata robhoti inogona kuvhiyiwa pachiratidziro checontent cabinet, uye mashandiro acho ari nyore.
6. Chero bedzi panotangira uye pekusungirwa pakatemwa, nzira yekudzidzisa iri nyore kunzwisisa.
Pashure: Zvine akabatana Robhoti Series
Zvadaro: Welding Robhoti Series
C Chimiro Yakakwira Yekumhanyisa Press
Solid furemu Imwe Crank Mechanical Press (STD ...